ခရီးဆောင်ဘက်ထရီ Mbuynow YN-035P ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ Androidsis ပါ
Androidsis မှာငါတို့လူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပစ္စည်းတစ်ခုထပ်မံကြိုးစားသည်။ ၏သူငယ်ချင်းများ Mbuynow သည်အလွန်အသုံးဝင်သောထုတ်ကုန်များကိုစျေးကွက်သို့ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းကိုကမ်းလှမ်းသောအရာများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောခရီးဆောင်ဘက်ထရီနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် Mbuynow YN-035P.
အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီက ကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုသွားသည့်အခါမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ်လေ့လာရေးခရီးနှင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မှုကိုရပ်တန့်ချင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ပလပ်များကိုမတွေ့ပါကကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းအတွက်အားသွင်းစရာများစွာရှိနိုင်သည်။
1 Mbuynow နှင့်၎င်း၏ 20.000 mAh ဘက်ထရီ, အမြဲတမ်း "on"
2 ၎င်းသည် Mbuynow YN-035P ဘက်ထရီဖြစ်သည်
4 Mbuynow YN-035P, ဒီစည်းချက်ကိုမရပ်လိုက်ပါနဲ့
5 Mbuynow YN-035P ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
6 အတွေ့အကြုံ၊ အကောင်းအဆိုးဆိုးများကိုသုံးပါ
Mbuynow နှင့်၎င်း၏ 20.000 mAh ဘက်ထရီ, အမြဲတမ်း "on"
မကြာသေးမီအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တွေ့မြင်ရသနည်း စမတ်ဖုန်းဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရှိသည် နှင့်ကြာကြာကြာချိန်။ တန်ဖိုးထားသောတိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်သော အချို့သောအချိန်များတွင်မလုံလောက်ပါ နေဆဲတိုးတက်မှုများအတွက်အခန်းတွေအများကြီးနှင့်အတူ။ အပတ်စဉ်အားသွင်းခိုင်းသည့်ထိုမိုဘိုင်းဖုန်းများနောက်ကွယ်တွင်များစွာရှိသည်။
သင့်ဖုန်းတွင်အပိုဘက်ထရီအားသွင်းရန်အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီများသည်အလွန်ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ရက်အနည်းငယ်တောင်ပေါ်မှာတောင်တက်သွားရင်ကော။ သဘာဝနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သော်လည်းလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့်အခြားသူများနှင့်ဆက်နွှယ်လိုသည့်သူများရှိသေးသည်။
Mbuynow ဆောင်တတ်၏ ကျွန်တော်တို့ကို socket အနီးနားမှာရှိနေဖို့မေ့သွားအောင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကတိပေးထားသောဘက်ထရီနှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအတွက်7အပြည့်အဝဘက်ထရီစွဲချက် ငါတို့အေးဆေးတည်ငြိမ်နိုင်တယ်
Mbuynow YN-035P သယ်ဆောင်နိုင်သောဘက်ထရီသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအမြဲချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Amazon ၌အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်.
၎င်းသည် Mbuynow YN-035P ဘက်ထရီဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ရှာနေသော YN-035P ၏သေတ္တာကိုဖွင့်ခြင်း ဘက်ထရီသူ့ဟာသူ, un USB ကြိုး Mini USB format နှင့်သေးငယ်။ အတိုချုပ်လမ်းညွှန်လက်စွဲပါရှိသည်။ ငါတို့ဘာမှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးလား။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ဘက်ထရီအကြောင်းပြောခြင်းသည်အနည်းငယ်ထူးဆန်းနိုင်သည်။ Mbuynow YN-035P တွင်မည်သို့ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပြောပြနိုင်သေးသည်။ ကျနော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတယ် ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကိရိယာ ထိတွေ့မှုအတွက်သာယာသော Matte tones များပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ရဲ့ ထောင့်ကျဉ်း သင်၏လိုင်းများကိုပျော့ပျောင်းစေ။ ၊
ထဲမှာ ရှေ့အပိုင်းသူကဗဟိုထဲမှာငါတို့ရှာပါ Mbuynow လက်မှတ်လိုဂို။ ထိုအခါဘယ်ဘက်အထက်၌တည်ရှိသည် LEDs လေးခု အရေးကြီးတဲ့ function ကိုဖြည့်ဆည်း။ မျက်နှာပြင်မရှိသောဤမီးများ ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ထရီအဆင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်ကပ် ရရှိနိုင်
နှင့် မီးခွက် ငါတို့ရပါလိမ့်မယ် lit 100% နှင့် 75% အကြား ဝန်၏။ သူတို့သာထွန်းလင်းမယ်ဆိုရင် မီးခွက် အဆိုပါတာဝန်ခံအဆင့်ကိုဖြစ်ပါတယ် 75% နှင့် 50% အကြား။ con မီးခွက် ကျနော်တို့ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် lit 50% နှင့် 25% အကြား စုစုပေါင်းဘက်ထရီ၏။ နှင့်သာအတူ မီး 1, ဘက်ထရီတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် 25% သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း ၎င်း၏စွမ်းရည်၏။ လွယ်ကူပြီးထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။
၏အစွန်းတွင် ထိပ်ဆုံး ငါတို့တွေ့ပြီ function တစ်ခုတည်းကိုလုပ်ဆောင်တဲ့ခလုတ်တစ်ခု။ အဲဒါကိုနှိပ် ဘက်ထရီပမာဏကိုညွှန်ပြသည့် LED များလင်းလာမည်။ ငါတို့ဖွင့်သောမီးပေါ်မူတည်။ ရှိသည်။
သငျသညျသင်နှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းတဲ့ခရီးဆောင်ဘက်ထရီလိုအပ်ပါက ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ်မလိုဘဲအမေဇုံတွင် ၀ ယ်ပါ.
ဘယ်ဘက်တွင်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ နှစ်ခု USB output ကိုဆိပ်ကမ်းများ ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျွန်တော်တို့ load လုပ်ချင်တဲ့ device ကိုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့မှာလည်းရှိတယ် Micro USB ထည့်သွင်းမှု port။ လေးပုံတစ်ပုံ USB Type-C format လုပ်ထားသော port ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘက်ထရီအားသွင်းရန် (သို့) ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာကိုအားသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။
ယင်း၏အတွက် နောက်ဘက် ကျနော်တို့အိမ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ပေါ်တွင်ရှာပါ ပါဝါဘဏ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် input နှင့် output ports နှင့်လိုက်ဖက်မှုရှိ၊
Mbuynow YN-035P, ဒီစည်းချက်ကိုမရပ်လိုက်ပါနဲ့
Mbuynow အိတ်ဆောင်ဘက္ထရီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ Y 100 ၎င်း၏ 20.000 mAh ရရှိနိုင်စေရန်, တစ်နာရီ3နာရီအားသွင်းရုံလောက်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့နှစ်ခုအားသွင်းဖို့ကိရိယာနှစ်ခုချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် တစ်ပြိုင်နက်တည်း USB port များမှတဆင့် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MacBook သို့မဟုတ်အလားတူလက်တော့ပ်ရှိပါက USB Type C အားသွင်းသည့်အခါ၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အားသွင်းနိုင်သည်။ သင်၏စက်ကိရိယာများကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတစ်ချိန်တည်း၌အားသွင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ်လျှပ်စစ်မီးမလိုဘဲတစ်ပတ်လုံးစမတ်ဖုန်းကိုနေ့တိုင်းအားသွင်းပါ။
Mbuynow YN-035P ဘက်ထရီအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
တင်နိုင်စွမ်း 20.000 mAh ဘက်ထရီ
USB အမျိုးအစား C ထည့်သွင်းမှု DC5V/3A 9V/2A 15V/2A 20V/1.5A
USB Type C output DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A
USB 1-2 output ကို DC5V / 3.4
အရွယ် 185 80 22 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 540 ဂရမ်
စြေး 39.99 €
ဝယ်ယူရန်လင့် Mbuynow YN-035P
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Mbuynow YN-035P ဘက်ထရီကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည် သင့်ရဲ့ရလဒ်ကမျှော်လင့်ချက်မှတက်သည်။ ခဲ့တာ အပြည့်အဝဝန်ပေးခြင်းနိုင်စွမ်း Motorola Moto G စမတ်ဖုန်းအထိ7ကြိမ်။ အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းသံသရာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဌအဓိကချိတ်ဆက်ထားသောဘက်ထရီကိုအားသွင်းခြင်းသည် ၃ နာရီကြာသည် ရှားပါး။ ၁၀၀% ထပ်မံရရှိနိုင်မည့်အချိန်တို။ ဤကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကြောင့် Mbuynow ဘက်ထရီသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှထင်ရှားစေသည်။
အဆင်ပြေသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံကိုဝတ်ဆင်ရန် နေရာများစွာမယူဘဲကျောပိုးအိတ်၏အိတ်ထဲတွင်။ ၎င်းသည်ဘောင်းဘီတွင် ၀ တ်ဆင်ရန်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်၎င်းကိုခရီးသွားသေတ္တာထဲတွင်ပြproblemsနာမရှိဘဲတပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
La တစ်ပြိုင်နက်တည်းမျိုးစုံ devices များအားသွင်းရန်စွမ်းရည် အခြားသူများထက်ပိုကောင်းစေသည်။ တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အားသွင်းနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အချိန်နည်းပါးသည်ကိုဆိုလိုသည်။
ကောင်းသောဆက်ဆံရေး စျေးနှုန်းနှင့်အတူစွမ်းရည်အားသွင်း 20.000 mAh ။
အလေးချိန်, ဤကိစ္စတွင်ကီလိုတစ်ဝက်ကျော်အလေးချိန်ရှိသော၊ ဤအတင်းအဖျင်း၏အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်များအနက်တစ်ခုမှာအရွယ်အစားများပါ ၀ င်နိုင်သော်လည်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ကြီးထွားလာနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » အိတ်ဆောင်ဘက်ထရီ Mbuynow YN-035P ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ